प्राय: पुरुषले ढाँट्छन् यी ५ कुरा !
मैले कसैलाई आँखा लगाएको छैन !
म चुरोट पिउँदिन !
मैले तिम्रो अलावा अरु कसैसँग सम्बन्ध राख्ने सोचेकै छैन !
म तिमीबिना एकदिन भन्दा बढी बस्नै सक्दिन !
म निदाएको होइन, केही सोच्दै थिएँ !